शिक्षकको नक्कली कार्डबाट खोप ! – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun शिक्षकको नक्कली कार्डबाट खोप ! – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
शिक्षकको नक्कली कार्डबाट खोप !
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार २०:१६
दमौलीः प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न पेशा र क्षेत्रका व्यक्तिले खोप लगाउन पाइने भए पछि व्यास नगरपालिकामा नक्कली कार्ड बनाएर खोप लगाएको पाइएको छ ।
सहरी क्षेत्रका केन्द्रहरुमा खासगरी शिक्षकको नाममा नक्कली कार्ड बनाउँदै खोप लगाउने भेटिएका थिए ।
व्यास २ को खोप केन्द्रमा गएका एक युवाले शिक्षकको कार्ड लिएर आए पछि खोप लगाएको बताए । ‘धेरै हिंडिरहनुपर्ने काम छ,’ उनले भने,‘कार्डले खोप पाइने भए पछि बनाएर ल्याएँ ।’
केन्द्रका कर्मचारीहरुले धेरै भीड भएको र समय पनि कम भएकाले सबैको कार्ड जाँच्न नसकिएको बताए । शिक्षकसहित बसका चालक, सह चालक ५५ वर्षसम्मका तथा प्राथमिकता प्राप्त सेवा क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोप दिइने भनिए पनि शिक्षकका नाममा बढी दुरुपयोग पाइएको हो ।
खचाखच भिडका बेला कार्ड परीक्षण नभएकाले पनि आवश्यकता भएका व्यक्तिले खोप नपाउने तर दुरुपयोगको समसया देखिएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १ श्रावण २०७८, शुक्रबार २०:१६ 167 Viewed